Archive du 20171023
Marc Ravalomanana « Havotantsika i Madagasikara »
Maizina ny hoavin’i Madagasikara ary miaina ao anatin’ny fahasahiranana sy ny fitaintainan-dava ny vahoaka Malagasy.
Depiote Nicolas Randrianasolo Avoahy izay manana « Dossier » mikasika ahy
Tafaverina an-tanindrazana ny sabotsy 21 oktobra teo ny solombavambahoakan’i Madagasikara Randrianasolo Jean Nicolas voafidy tany Betroka rehefa avy nanatrika ny fivorian’ny parlemanta Panafrikana notontosaina tatsy Afrika Atsimo ny 03-19 oktobra lasa teo.
Profesora Zafy Albert Hotsaroana mandrakariva, hoy ny Filoha
Tontosa soa aman-tsara tany amin'ny fasan-drazany any Betsiaka Ambilobe ny sabotsy 21 oktobra teo ny fandevenana ny Profesora Zafy Albert.
Clémence Raharinirina Hitarika fanakorontanana
Milaza ny hitarika fitokonana indray ireo mpitarika ny Fikambanan’ny “Taxi” Antananarivo Renivohitra (FTAR), tarihin’i Clémence Raharinirina manomboka ny zoma 27 oktobra ho avy izao.
Mécanicien nipoahan’ny “Gaz” Tapaka ny tongony, nipotsaka ny tsinainy…
Zava-doza no nitranga teny Ankinininabe Andramahavola Ambohidrapeto ny sabotsy teo. Tovolahy iray nitondra ny anarana hoe Solo 30 taona no nipoahan’ny « gaz » teo am-perinasa.
Mpivarotra hani-masaka Tsy manana toerana fanariana fako ny ankamaroany
Tsy manana toerana fanariana rano maloto sy poti-kanina ny ankamaroan’ireo mpivarotra hani-masaka amoron-dalana eto an-drenivohitra.
Famatsiana herinaratra ao Toamasina Azo ny “transformateur”, mitohy ny halatra tariby
“Transformateur” manana tanjaka 160Kva iray no nirefotra tao Mangarano II ny alarobia lasa teo ka telo andro sy roa alina tsy mahazo herinaratra ny mpanjifan’ny jirama maro be hatrany Tsarakofafa.
Mpitandrina Lala Haja Rasendrahasina Nankasitrahan’ny FJKM ny asa vitany
Notontosaina omaly alahady 22 oktobra nanomboka tamin'ny 3ora tolakandro tao amin'ny FJKM Ankadifotsy ny fisaorana ny Mpitandrina Lala Haja Rasendrahasina noho ny nitantanany ny FJKM nandritra ny 12 taona.
Kitra Malagasy – « Poules des As 2017 » Mitarika ny CNaPS Sport
Mitarika lavitra amin’ny isa 9 ny CNaPS Sport Itasy rehefa nandresy 3-0 indray ny Cosfa Analamanga omaly alahady 22 oktobra 2017 teo amin’ny andro faha-3-n’ny “Poules des As”
Fifidianana ho filohan’ny FMF vaovao Ny tsara toerana amin’ireo akaiky an’i Ahmad
Efa mandeha sahady ny tombantombana samihafa ho an’izay olona tena hisolo tanteraka ny toeran’i Ahmad taorian’ny datin’ny sabotsy 14 oktobra teo nivoahan’ny daty hanatanterahana an’ireo fifidianana amin’ny fitantanana ireo rafitra hitantana ny baolina kitra Malagasy.
Tany tsy misy fanjakana !
Raha resaka rafitra no resahina, dia mbola misy tokoa ny fanjakana eto amintsika, fa raha ny lamina ara-piarahamonina sy ny fifehezana ny firenena, dia ara-bakiteny mihitsy ny hoe : tany tsy misy fanjakana.
Sekoly Katolika Tsy manaiky ny fandaminan’ny fanjakana
Niteraka adihevitra be tetsy sy teroa ny fanampahan-kevitry ny DIDEC (DIrection Diocesaire de l'Enseignement Catholique)
Frantsay voan’ny pesta nitsoaka hopitaly Nodimandry rehefa avy nandoa ra
Anisan’ny mahatonga ny tsy fifehezana sy fiparitahan’ny pesta ao Toamasina ny fisian’ireo olona marary sy voan’ny pesta mahalala tsara ny loza mitatao aterany kanefa dia tsy mety manaraka fitsaboana.
Hopitalim-panjakana Maty raha tsy manam-bola ny marary
Tena mahakivy ny maro ny fandraisana an-tanana eny anivon'ireo hopitalim-panjakana maro isan-tsokajiny eo amintsika amin'izao fotoana. Maty raha tsy misy vola.
Fahasalamana Ratsy nify ny 90 %-n’ny Malagasy
Marary sy ratsy nify avokoa ny 90 %-n’ny Malagasy, raha araka ny fanazavan’ny dokotera Rénaud Rasolonirina, tompon’andraikitra misahana ny fahasalaman’ny nify sy ny ativava eto amin’ny Faritra Analamanga.
Voly Penjy Hovelomina ao Farafangana
Tapa-kevitra ny hamelombolo indray ny voly “Mahampy” izay ampisaina amin’ny fanamboarana harona sy satroka sy asa tanana maro samihafa ny fikambanam-behivavy ao amin’ny kaominina ambanivohitr’i Manamboatra distrikan’i Farafangana.
Voalavo be, mpitondra aretina Parasy kely fa tena misy entina. Fako aman-taonina toa tranon'ny pesta, Gasikara manontolo no tsy afa mihetsika.
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny alalan’ny lamesa lehibe ny taom-pianarana 2017-2018 ho an’ny sekoly katolika eto Madagasikara,